कता जाँदै छ हङकङको आन्दोलन ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more कता जाँदै छ हङकङको आन्दोलन ?
कता जाँदै छ हङकङको आन्दोलन ?	को हुन् आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता ?
काठमाडौं । निरन्तर विरोध भएपछि सुपुर्दगी विधेयक त फिर्ता भयो तर हङकङको आन्दोलन भने मथ्थर हुन सकेन । हङकङ सरकारले विधेयक फिर्ता लिएसँगै आन्दोलन झन् चरम बन्दै गएको छ ।
हङकङका सडकहरु झन् प्रदर्शनकारीले भरिएका छन् । दुई दिन अघि मात्रै प्रदर्शनकारीले हङकङको विमानस्थलसमेत कब्जा गरेका थिए । पछिल्लो केहि दिनदेखि यहाँका सडकमा लाखौं मानिसहरु प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् ।
युवाहरुको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनमा अहिले युवादेखि बुढाबुढी मात्रै होइन् सबै पेसा, क्षेत्र, समुदायका मानिसहरु थपिएका छन् । आन्दोलनमा प्रदर्शनकारीको संख्या बढेसँगै आन्दोलन झन् आक्रामक र चरमता तिर पुगेको छ । आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका युवाहरु झनै जोशिएका छन् ।
२३ वर्षे ठिटोको नेतृत्वमा आन्दोलन
हङकङको ऐतिहासिक आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता एक दुब्ला अनि पातला २३ वर्षे ठिटो जोशुआ वांग हुन् । वाङ अहिले हङकङमा लोकतन्त्र प्राप्तिको संवाहक बनेका छन् ।
सन् २०१४ मा जोशुआ वांग चर्चामा आएका थिए । त्यसबेला उनले ‘अम्ब्रेला मूवमेन्ट’ चलाएका थिए । वांगले चलाएको अभियानका बेला हङकङमा लोकतन्त्र र मतदान अधिकारमा बढोत्तरीको माग गरिएको थियो । त्यस समय उनि १९ वर्षका मात्रै थिए । यसै आन्दोलनबाट उनले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय चर्चा कमाए ।
जोशुआ वांग ।
प्रतिष्ठित अन्तराष्ट्रिय पत्रिका टाइमले सन् २०१४ को सबैभन्दा प्रभावशाली युवकको रुपमा जोशुवा वांगलाई राखेको थियो । सन् २०१५ मा फोच्र्यून मेगाजिनले उनलाई ‘विश्वकै महान् नेता’को श्रेणीमा राखेको थियो । जोशुआलाई सन् २०१८ मा नोबेल शान्ति पुरस्कारको निमित्तसमेत सिफारिस गरिएको थियो । त्यस समय उनि जम्मा २२ वर्षका थिए ।
जोशुआ हाल डेमोसिस्टो नाममा पार्टीको महासचिव छन् । उनले आफुँ १९ वर्षको हुँदा यस पार्टीको स्थापना गरेका थिए ।
अहिले हङकङमा भईरहेको प्रर्दशनको देखिने विषयको रुपमा सुपुदर्गी विधेयक चर्चामा छ । जसमा हङकङको व्यक्तिले चीनमा कुनै अपराध गरेमा वा प्रदर्शन गरेमा उसको विरुद्ध चीनले नै कारबाही तथा मुद्दा चलाउने प्रस्ताव छ ।
यही मुद्दालाई लिएर जोशुवांगले नेतृत्व गरिरहेको आन्दोलन उत्सर्गमा छ । २३ वर्षीया वांगले नेतृत्व गरेको आन्दोलनले अहिले चीनलाई निकै समस्यामा समेत पारेको छ ।
खासमा चीनले यस विधेयक मार्फत हङकङका जनतालाई आफ्नो दबदबामा राख्न खोजेको थियो । तथापि ठुलो विरोध पश्चात हङकङ सरकारले विधेयक त फिर्ता लियो तर पनि युवा आन्दोलन भने सकिएको छैन् । आन्दोलनलाई हङकङका युवाले लोकतन्त्रको बहालीको रुपमा अगाडि बढाएका छन् ।
एक देश, दुई नीतिको प्रभाव
जसरी भारत नियन्त्रित जम्मू–कश्मीरमा छुट्टै झण्डा, छुट्टै संविधान अनि छुट्टै कानून नियम थियो, त्यसैगरि हङकङमा पनि छुट्टै कानूनी व्यवस्था छ । चीनले हङकङलाई आफ्नो विशेष प्रशासनिक क्षेत्रको रुपमा मान्दै आएको छ ।
चीनले विदेशी मामीला र रक्षा बाहेक सबै कुरामा हङकङलाई स्वायत्तता दिएको छ । यहाँ रक्षा र परराष्ट्रसँग सम्बन्धित मुद्दामा चीनले अधिकार लिएको छ । पछिल्लो समयमा भईरहेको आन्दोलन हङकङमाथि चीनको दबदबालाई परास्त पार्नु हो ।
के हो हङकङको इतिहास ?
हङकङ पहिला ब्रिटेनको कब्जामा थियो । एक व्यापारिक बन्दरगाहको रुपमा विकास भएसँगै सन् १८४२मा ब्रिटेनले आफ्नो विशेष उपनिवेश राज्य बनाएको थियो । तर, सन् १९४३ मा हङकङलाई चीनले ब्रिटेनसँग खरिद गरेका थियो ।
द्धितिय विश्वयुद्धको समयमा भने हङकङमाथि जापानले कब्जा जमाएको थियो । पछि जापानका सैनिक मारिएसँगै पुनः हङकङ चीनको नियन्त्रणमा गएको थियो । १९ डिसेम्बर, १९८४ मा चीन र ब्रिटेनको बीच हङकङको विषयमा विधिवत हस्ताक्षर भएसँगै अहिलेसम्म हङकङ चीनको विशेष प्रशासनिक क्षेत्र रहँदै आएको छ ।
साउन २९ गते, २०७६ - १८:०३ मा प्रकाशित